ဒါဇင်ပလပ်စ်နှင့်ရေဘေးအလှူ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ဒါဇင်ပလပ်စ်နှင့်ရေဘေးအလှူ	14
Posted by Shwe Ei on Aug 8, 2015 in Creative Writing, Environment, Myanma News, News | 14 comments
ဒါဇင်ပလပ်စ်အဖွဲ့မှ ၄ရက် သြဂတ်စ် ၂၀၁၅
ည ကိုးနာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့မှာ စတင်ထွက်ခွါပြီး
၅ရက် သြဂတ်စ် နေ့လည် ၁၂ နာရီတွင် မကွေး
မကွေးမြို့တွင် လှူဒါန်းရန် ဝယ်ယူသော
အိမ်ထောင်စု ၃၀၀ အတွက်
တစ်အိမ်ထောင်လျှင်. . .
၄. ခေါက်ဆွဲခြောက် ၅ထုပ်
၅. ကွေကာ ၁၀ထုပ်
၇.ဖယောင်းတိုင် အကြီး ၃ထုပ်
၉.ဓါတ်မီး (၂တောင့်ထိုး) ၁လက်
၁၁.မိုးကာစ ၃ပေ ၁စ
၁၃. အမျိုးသမီးသုံးပစ္စည်း ၁ထုပ်
ခန့်မှန်းခြေ တစ်အိမ်ထောင်လျှင် တစ်သောင်းကျပ်ခန့်
ကျားဝတ် မဝတ် ခလေးဝတ် အဝတ်အစား
၁) ပေါက်စုရွာ အိမ်ထောင်စု ၂၀၀ ဝန်းကျင်
၂) ချွန်းစုရွာ အိမ်ထောင်စု၂၀၀ ဝန်းကျင်
၃)ဖိုးပေါက်စုရွာ အိမ်ထောင်စု ၁၅၀ ဝန်းကျင်
၄) သာယာကုန်းရွာ အိမ်ထောင်စု ၁၅၀ ဝန်းကျင်
စေတုတ္တရာ ပွင့်ဖြူ ကျောင်းတော်ရာ စသည့်
နေရာများသို့ သွားရောက်လှူဒါန်းသူ များ
အများ အပြားရှိပါသည်။ ကျေးရွာအများစုမှာ
ပို့ဆောင်ရန် စက်လှေ အခက်အခဲရှိပါသည်။
မကွေးမှ ပြည်သို့ ညတွင်းချင်းဆက်လက်ထွက်ခွါလာရာ
ပြည်မြို့သို့ မနက်ဆယ်နာရီ ခန့်တွင်ရောက်ရှိပီး
မှော်ဆရာတို့ အဖွဲ့ လာကြိုရွေ့ဝေဠုဝန်ကျောင်း
၌ ခေတ္တ နေရာချပြီး မြန်အောင်မြို့
အနီးတဝိုက်ရှိ ရေမြုပ် နေသော ကျေးရွာများ
မြန်အောင်မြို့ ပဲတခွဲအုပ်စု မဲကင်းချောင်ကျေးရွာ
မှ ကျွဲများ နေရာရွှေ့ဖို့ အခက်ခဲ ဖြစ်နေပြီး
ရေထဲမှာ မတ်တပ်နေရတာ သုံး လေးရက်ကြာ
ပြီဖြစ်ကြောင်း . . .
စားသောက်စရာနဲ့ ရေသန့်များ အရေးတကြီး
လိုအပ်နေကြောင်း . . နယ်ခံ ကယ်ဆယ်ရေး
ဒါဇင်ပလပ်စ်အနေနဲ့ လက်ကျန် အလှူငွေ
၁၃သိန်းဘဲ ရှိတော့တာကြောင့် အောက်ပါစာ
ရင်းအတိုင်း အိမ်ထောင်စု ၃၀၀ စာ လှူ ဒါန်းရန်
၁) ရေသန့် ၆လုံး
၂) သီးစုံဓါတ်ဆား ၃ထုပ်
၃) ခေါက်ဆွဲခြောက် ၅ထုပ်
၄) ကွေကာ ၁၀ထုပ်
၅) ဖယောင်းတိုင် ၃ထုပ် မီးခြစ်၁လုံး
ခန့်မှန်းခြေ ၄၅၀၀ကျပ် ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါသည်။
ယနေ့ သွားရောက်မည့် ကျေးရွာများ
အခြေနေကို ဓါတ်ပုံနှင့်တကွ ဆက်လက်
ယခုပို့စ်ကို မြန်အောင်မြို့မှ ရေးပါသည်။
၈ရက် သြဂတ်စ် စနေနေ့ နံနက် ၆း၀၆ နာရီ လှူဒါန်းခဲ့သော ကျေးရွာများ မှာ…
၃) သုံးဆယ်ကျွန်းကျေးရွာ (၁/၂)
၄) နှစ်ကျပ်ကျွန်းကျေးရွာ (၁/၂)
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အမြဲတမ်းလှူဒါန်းနိုင်အောင် ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေတဲ့ ဒါဇင်ပလပ်အဖွဲကို လေးစားပါတယ်
Shwe Ei says: -ဆုတောင်းပေးတာ ကျေးဇူးပါ လေးလေးရေ..
-ရွာသူားအားလုံး တတ်နိုင်သမျှ ၀ိုင်းကူနေကြတာတွေ့ရလို့ ၀မ်းသာမိပါတယ်..
ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ် says: အားပေးပါတယ်.. ကျွဲလေးတွေ သနားစရာ ခေါ်လာခဲ့ပါလား ငင်
Shwe Ei says: -ကျွဲတစ်ကောင်ကိုလှေပေါ်ဆွဲတင်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်သလောက်ဘဲဗျ..
-ဖြစ်နိုင်တာက ရွာထဲမှာဘဲ နုန်းမြေတွေကို တောင်ပို့ဖြစ်အောင်..
-ပန့်နဲ့မှုတ်တင်ပြီး… ရေပေါ်မှာကုန်းမြေပေါ်လာမှ ကျွဲ နွားတွေကို ကုန်းပေါ်တင်
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဒီ အလှူအတွက် ဒါဇင်ပလပ် ကိုရော
ကောလင်း အလှူတုန်းက အတွက် ကိုရဲစည်ကိုရော
မကွေးတိုင်း အလှူအတွက် အောင်မိုးသူတို့ကိုရော ဒီနေရာကနေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကိုယ့်အလှူ ဘယ်လောက်ထိရောက်တယ်ဆိုတာ မြင်နိုင်လို့ပါ။
Shwe Ei says: -အလှူအတွက်လဲ ကျေးဇူးပါ ဇီဇီ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
black chaw says: လှူဖြစ် အောင် စုစည်းနိုင်သော
ဒါဇင်ပလပ်စ် အဖွဲ့ က လူငယ်တွေ ကို လေးစားပါတယ်ဗျာ…။
Shwe Ei says: -ဒါဇင်ပလပ်စ်အတွက်လဲ အမှတ်တရ ဖြစ်တဲ့ အလှူတစ်ခုပေ့ါဗျာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2898
ဦးကျောက်ခဲ says: အလှုတော်ငွေပါဝင်တာကလွဲပြီး ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ မလှုနိုင်တဲ့ဘဝမို့…
ရွာထဲက ဝိသကြုံ ဒါဇင်ပလပ်စ်အဖွဲ့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့…
သည့်ထက်ပိုပြီး စွမ်းဆောင်နိုင်ကြပါစေ ခင်ဗျား…
Shwe Ei says: -နောက်တစ်ခေါက်သွားချင်သေးတာ..အန်ကယ်ကျောက်စ်ရေ..
Mike says: .ထိရောက်တယ်..သဘောကျတယ်…အဖွဲ့သားတွေကိုလေးစားချီးကျူးပါတယ်
Shwe Ei says: -ထိရောက်တာမှန်ပေမဲ့..စကားတော့ ပြောရတယ်ဗျ…
-အလှူအဖွဲ့လာမဲ့အကြောင်း အုပ်ချုပ်ရေးမှုးကို အကြောင်းမကြားလို့ဆိုပြီး ရန်လာတွေ့တာကတစ်မျိုး
-လှူချင်ရက်လက်တို့ အဖွဲ့လာမှဘဲ ၀န်ကြီးရောက်နေလို့ သွားကြိုတာနဲ့ တိုက်ဆိုင်ပြီး
-လူမတွေ့ရဘဲ အထုပ်ချပြီး ပြန်ခဲ့ရတာက တမျိုး… :P
Alinsett @ Maung Thura says: သာဓု အကြိမ်ကြိမ် ခေါ်လျက်…